Mikasika ny - Cloud Library
Accueil - Mikasika ny
Momba ny Coud Library
Ny Messenger international dia manao vaindohan-draharaha ny fahafahan’ny pastora sy ny mpitarika ireto fitaovana ireto na toy inona na inona faritra misy azy sy anjara toerana tazoniny. Ho amin’izao tanjona izao indrindra no namoronana ny Could Library. Ny messenger dia tamba-jotram-pitsinjarana iraisam-pirenena, ka mamela ny fitaovana vita dika ho azo alefa mivantana sy atao “”download.”
Ny tanjonay dia ny handikana ireto fitaovana ireto amin’ny fiteny reny rehetra. Ny fahavitan’izany mantsy dia hahatonga ny 98%-n’ny mponina ety An-tany ho tratran’ny fampianarana. Ny Cloud Library dia iray amin’ireo fomba hahatanterahana izany tanjona izany. Nahoana, hoy ianao? Satria ny fitaovana elektronika dia dia azo ampitomboina isa sady tonga lavitra haingana kokoa noho ny fitaovana entina an-tànana. Antenainay fa ankafizinao ny zavatra hitanao ato amin’ny Cloud.
Avy Amin’ny Mpamorona
Tsy ny hitory ny Filazantsara ihany no nanirahan’i Jesosy antsika, fa ny hanao mpianatra ihany koa. Ireto hafatra ireto dia hanampy anao ho tonga mpianatr’i Kristy. Manao fandaniana amin’ny fanofanana anao izahay satria izahay dia mino anao sy ny fahaiza-manaonao fa ianao dia hanova izay rehetra eo ambany fiahianao amin’ny alalan’ny fahasoavan’Andriamanitra. Ireto fitaovana ireto dia hanampy anao hahita fifandraisana akaiky sy manokana amin’Andriamanitra. Hovain’ ny herin’ny Teniny ny fiainanao rehefa mitombo amin’ny fifandraisana amin’i Kristy ianao.
Ianao dia noforonin’Andriamanitra ho amin’ny tanjona tsy manam-paharoa izay hampiasaina amin’ny fanomezam-pahasoavanao sy ny seha-pisarihanao. Ampaherezinay ianao mba hikaroka ny fahafenoana izay efa nomanin’Andriamanitra ho anao. Ny vavaka ataonay dia mba hampitao anao anie ireto fitaovana ireto raha eo an-dàla-pikarohana zava-baovao ianao.
Mirary soa ho anao sy ny ankohonanao,
Moa ve mirehitra ao am-ponao ny hahita fitaovana manova fiainana voazarazara manerana izao tontolo izao? Raha toa ka mahaliana anao ny hanohana ny iraka ataon’ny Cloud Library dia mandefasa mailaka ao amin’ny getinvolved@cloudlibrary.org. Misaotra anao mialoha izahay amin’ny vavaka sy ny fanohanana ataonao!